University of Erlangen eNuremberg - Tadisha Kwamanye Amazwe e-Europe
University of Erlangen eNuremberg
University of Erlangen eNuremberg Yokuxhumana
Wasekelwa : 1742
Ungakhohlwa xoxa University of Erlangen eNuremberg
Bhalisa at University of Erlangen eNuremberg
University of Erlangen eNuremberg kuyinto yomphakathi iriseshi yaseyunivesithi emizini Erlangen futhi eNuremberg eBavaria, Germany. Igama Friedrich-Alexander livela umsunguli wokuqala Friedrich senyuvesi, Margrave saseBrandenburg-Bayreuth, futhi izuzisa layo abangamaKristu Frederick Charles Alexander, Margrave saseBrandenburg-Ansbach.
In Germany, yendabuko ubuciko liberali amanyuvesi akuvamile ukuba esikoleni engineering noma emnyangweni. Nokho, FAU unawo abahlukene engineering ubuhlakani.
FAU singesesibili ngobukhulu State University in the state eBavaria. Ine 5 amandla, 23 Iminyango / izikole, 30 iminyango emitholampilo, 19 iminyango ezizimele, 656 professors, 3,404 amalungu abasebenzi bezemfundo futhi cishe 13,000 abasebenzi.
In semester Ebusika 2014/15 azungeze 39,085 abafundi (kufaka 3,556 Ukuba nabafundi bakwamanye amazwe) wabhalisa eyunivesithi 239 mikhakha, nge 2/3 ukutadisha at the campus Erlangen kanye asele 1/3 at the campus Nuremberg. Lezi izibalo wafaka FAU ohlwini top 10 amanyuvesi ngobukhulu eJalimane.
Ngo 2013, 5251 abafundi iziqu enyuvesi futhi 663 zobudokotela no 50 iziphakamiso post-zobudokotela babhaliswa. Ngaphezu kwalokho, FAU wathola 171 million Euro (2013) ngezimali zangaphandle ngomnyaka ofanayo, okwenza kube omunye third-party emayunivesithi esiqine abaxhaswe Germany.
Ngo 2006 futhi 2007, nanjengencenye yeluhlelo lwekutfutfukiswa kwetinhlelo kazwelonke excellence isinyathelo, FAU wakhethwa German Research Foundation njengenye abawinile kule German Amanyuvesi Excellence Initiative. FAU futhi ilungu DFG (German Research Foundation) kanye Abaphathi eziphezulu Industrial inethiwekhi Europe.
Ngo oyisikhulu Academic of World Universities for nyaka 2014, FAU zibalwa yesibili phakathi emayunivesithi German Engineering / Technology and Computer Sciences iqembu lazo zonke nemingcele ezine simo TOP, FUN, HiCi futhi PUB.
Faculty of Humanities, Social Sciences, futhi Theology
Faculty of Business, Ezomnotho, kanye noMthetho
1743 - I-University is eyasungulwa Margrave Friedrich saseBrandenburg-Bayreuth
Inyuvesi e Erlangen yasungulwa ngo umoya absolutism ukukhanyiselwa. Umsebenzi emanyuvesi German ekhulwini weshumi nesishiyagalombili ukukhonza izidingo ababusi abaningi ngokwenza amalungiselelo imfundo nokuqeqeshwa bakahulumeni ukuthuthukisa idumela izikhulu.
Loku kuphindze kwaba umthombo oyinhloko ugqozi Margrave Friedrich saseBrandenburg-Bayreuth ngubani wasungula Friedrichs-Universität e ubukhulu bakhe 1743 ngosizo Margravess Wilhelmine kanye likaShansela lokuqala University, Daniel de Superville.
Kwakuthinta nyuvesi lwesithathu kakhulu amiswa Franconia, emva amayunivesithi Altdorf neWürzburg, futhi sasisekelwe emzini yasebukhosini Erlangen e Academy yangaphambili knight sika esisogwini Hauptstraße. Wokuvulwa University senzeka 4 November 1743, umcimbi okuyinto namanje ayekhumbula njalo ngonyaka ngesikhathi kufa academicus.
1769 - I-University unwetshiwe ngu Margrave Alexander
Ezinsukwini zalo zokuqala, University e Erlangen wayengomunye walaba izikhungo ezincane kunazo zonke zazo. Linani selilonkhe lebantfu labange 64 Abafundi wabhalisa e-University entsha ngonyaka isisekelo salo futhi bakufundisa 16 professors; inombolo isilinganiso abafundi wasala emhlabeni 200 isikhashana.
I ambalwa emashumini okuqala okuba khona yeNyuvesi zaziphawuleka ngokungabi izinkinga zomnotho kusukela margraviate saseBrandenburg-Bayreuth kwaba incane hhayi abacebile ngokukhethekile. Kwaze kwaba 1769, lapho umugqa Bayreuth safa kanye margraviate saseBrandenburg-Bayreuth munye nalelo saseBrandenburg-Ansbach, ukuthi Friedrichs-Universität wanikezwa isisekelo esiqinile ngaphezulu zezimali. Ukuze kuhlonishwe Margrave Alexander, umbusi omusha, futhi owayengumphathi babe abavikela kokuqala yeNyuvesi, University iqanjwe kabusha Friedrich-Alexander-Universität ngawo lowo nyaka.
Ububanzi bendabuko eyala wafundiswa ngaphakathi amakhono of Theology, Law, Okwelapha Nokuhlinza Philosophy. Ngaphandle esigodlweni Hohenzollern okuyinto, nekhaya kuya Dowager, kuphela wadlala indima yomphakathi abekelwe emaceleni, idolobha elincane margravial ka Erlangen babengenalo zezombusazwe ezibalulekile, izikhungo zezomnotho noma kwamasiko, futhi oprofesa University manje atholwe isimo eside emphakathini edolobheni sika.
1810 - Franconia iba yingxenye Bavaria
Iminyaka lengemashumi lasihlanu yangembili emva isisekelo salo, University kwavele ushintsho olukhulu ngenxa yezinxushunxushu zezombusazwe. Ukudluliswa amandla umqhele Prussian e 1792, embusweni French e 1806 kwagcina umqhele Bavarian e 1810 siguqulwe University margravial ibe isikhungo kukahulumeni. Nakuba lokhu kwakusho ukuthi walahlekelwa kakhulu yokuzimela yayo, ezifana yomthetho ayo kanye namalungelo akhethekile okunikeze isakhamuzi inyuvesi, futhi ngcono izimali yeNyuvesi.
Inani labafundi lase linyuke futhi wahlala izinze emhlabeni 400 ngalesi sikhathi. I izinhlelo ndawonye eyunivesithi e-University of Landshut, ezabekwa uNgqongqoshe Bavarian of State, Maximilian Joseph Montgelas, kwakusho ukuthi ekuqaleni kwekhulu weshumi nesishiyagalombili ikusasa University u lihuduleke ku izikhathi ezingaphezu kwesisodwa. It ukweletwa wokusinda kwalo ekugcineni yokuthi sasinamaphiko kuphela ubuhlakani emfundisweni amaProthestani Bavaria. Ukube lokhu hhayi ayaqhubeka ekhona, bonke abafundi Bavarian emfundisweni Protestant, kabani izinombolo lase likhule kakhulu ngenxa ukuhlanganiswa Franconia yakamuva ku Bavaria, ngabe baye baphoqeleka ukuba ukufunda ngaphandle Bavaria.
1818 - I Schloss ngokomthetho elithekelisiwe University
Ngo 1818, University atholwe nabaningi izakhiwo ezintsha. Ngemva kokufa Sophie Caroline, ngomfazi umsunguli University yesibili, ngubani ayehlala e Erlangen njengoba Dowager yakhe kusukela 1764, Inkosi Maximilian mina Joseph of eBavaria ezinikelwe le Schloss, the Schlossgarten, the orangery nezinye izakhiwo ngaphambilini owned by margraves University.
Ingxenye yokuqala yekhulu nesishiyagalolunye futhi wabona kabusha Wilhelm von Humboldt ezinkulu umqondo yaseyunivesithi, lapho wakhuthaza inhlanganisela ucwaningo nokufundisa. Izinkulumo okuyinto wayeke bagxila ukwenzisa oko- ngokuqinile exegetic yemisebenzi ejwayelekile manje igxile indlela ezikoleni nesiqondiso maqondana nocwaningo ezimele.
1824 - Erlangen University Hospital usekelwe
Ukwakhiwa University Hospital Erlangen, esibhedlela abasengxenyeni esempumalanga ye Schlossgarten, umsebenzi okhishiwe yokuqala enkulu wokwakha owenziwa University futhi laqedwa 1824. Ukuthuthukiswa okusheshayo maqondana kwamangqamuzana ezikhulayo phakathi kwezihloko, futhi ezindaweni ezintsha ucwaningo kwezokwelapha sciences engxenyeni yesibili yekhulu nesishiyagalolunye siphoqe ukwakhiwa entsha amaningi emhlabeni Schlossgarten kanye kanye Universitätsstraße, elafika yakha umnyombo University. Izakhiwo yesiteleka kakhulu kusukela kulesi sikhathi kukhona Kollegienhaus (1889), anatomy pathology izakhiwo (1897 futhi 1906) futhi University Library (1913).
1890 - I-University ine isilinganiso abafundi eziyinkulungwane
Ukwanda ngobukhulu waya isandla ukudalwa neminyango eminingi emisha nge nezikhungo ngaphakathi kubo lapho, ohlukile neminyango, akagcinanga eyala zezemfundo kodwa futhi baqhuba ucwaningo ezimele. Student izinombolo lenyuka ngokuphawulekayo engxenyeni yesibili yekhulu nesishiyagalolunye. Ngo semester ehlobo 1890, inani abafundi ababhalise bezihlahla babehamba phambili 1000 uphawu okokuqala,
okusho ukuthi University zibalwa inombolo 15 phakathi 21 amanyuvesi eMbusweni German ngokuya ngobukhulu. Lesi senzakalo futhi yasishintsha ubudlelwano phakathi University futhi idolobha. Nakuba isithombe Erlangen ekhulwini weshumi nesishiyagalombili ayekade kunqunywa abathengisa Huguenot kanye nemisebenzi yezandla, ekhulwini nesishiyagalolunye University waqala zidlala indima ephawulekayo.
Phakathi osolwazi edume kunazo owafundisa eNyuvesi kwakungamadodana semfundiso yenkolo Adolf von Harleß, ummeli yobuKristu injabulo, the uprofesa wokwelapha ngokumpompela Franz Penzoldt, mlando Karl Hegel, sefilosofi Ludwig Feuerbach, uprofesa German Benno von Wiese, uprofesa wezifundo asempumalanga futhi imbongi Friedrich Rückert, sezibalo Max Noether, i-physics Eilhard Wiedemann, the bamakhemikhali Emil no-Otto Fischer, the sezitshalo Johann Christian Daniel von Schreber, the kunodokotela Theodor no-Ernst Martius, the sezilwane Enoke Zander, kanye sokuma Bruno von Freyberg.
Abanye abafundi Erlangen ka- ezidumile zihlanganisa theologist Wilhelm Löhe, ummeli futhi sikahulumeni Prussian Karl Freiherr von Stein kuya Old Stone, udokotela Samuweli Hahnemann, abalobi Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck, Christian Friedrich Daniel Schubart futhi Agasti Graf von Platen, usokhemisi Justus von Liebig, i-physics Georg Simon Ohm nesazi sezibalo Emmi Noether.
1920 - Pro-li iba Rector
Ukugqashuka kwempi yezwe yokuqala ngo- 1914 kwaba nethonya elikhulu ku-University. Ngosuku lokuqala kakhulu ukugqugquzela, the Kollegienhaus , the Schloss futhi eziningana neminyango at Universitätsklinikum Erlangen yaphendulwa izibhedlela abalimele. Cishe izingxenye ezintathu kwezine zobuso abafundi ezathinteka izinsizwa noma ukubhaliswa yokuzithandela. Lokhu kwaholela ekutheni iconsi omkhulu izinombolo abafundi baqhubeka befundela. Phakathi neminyaka yempi ngokuvamile kwakunabantu kuphela mayelana 300 abafundi ekhona Erlangen.
Izenzakalo Bavarian Yenguquko 1918 futhi 1919 futhi ukuqedwa okwalandela yokubusa kwamakhosi kwakusho ukuthi isihloko 'Umphathi Magnificentissimus' okuyinto wayeke uzelwe iNkosi uPhilip usuyabusa manje wanyamalala. Ngakho Ihhovisi Pro-li ushintshwe waba 'Umphathi (Magnificus)'e 1920. Ngokufanayo, igama elithi 'Pro-li' indawo isihloko odlule 'Exprorektor'. Ukuze abafundi abaningi, Eminyakeni ngokushesha ngemva kweMpi Yezwe Yokuqala zaziphawuleka ngokungabi ubumpofu futhi abafundi abaningi emakhaya antulayo wafika University ethembeni ekwakheni ikusasa elisha bona naphezu imfundo yabo nesizotha.
Izinga lokwehla kwamandla emali futhi ucabanga izinhlangano eziningi scholarship wanezela lapho ezwa ngosizi lwabo. Umfundi Abamele iKomiti yasungulwa ngo 1919 futhi salandelwa 1922 ngalokho manje Studentenwerk (Student Services) okuyinto, e 1930, wavula Studentenhaus ukuthi namanje umi Langemarktplatz namuhla. Kokuphelele, Nokho, ngemuva ekukhuleni kwayo okusheshayo phakathi yekhulu nesishiyagalolunye, the 1920 babe inkathi yokujama tsi for University.
1928 - I-Faculty of Sciences usekelwe
Ukubaluleka elandayo natural sciences ukuthi kucaca ngakho engxenyeni yesibili yekhulu nesishiyagalolunye kwaholela ushintsho isakhiwo yeNyuvesi. Ngo 1928, ngesayensi yemvelo kwahlukaniswa off ngaleso sikhathi Faculty of Humanities futhi Isayensi Yabantu futhi banikezwe ubuhlakani isimo eyabo.
1933 - yokuzimela The University uwela yimpango Sikazwelonke Sokusebenzela Uhulumeni
Isimo sezulu ubuzwe umbono ukuthi kakade wayesenezinsuku obusepakameni at University e Erlangen ngesikhathi Weimar Republic, futhi ngo-November 1929, German National Socialist Student Association yazuza eningini elingaphezu kukahhafu izihlalo okhethweni Abamele Student iKomiti okokuqala ngasiphi inyuvesi German. Phakathi neminyaka engu-uMuammar amaNazi, Erlangen akophulwanga yimiphi imicimbi Futhi kwakuthi ngezinye amanyuvesi, ezifana ukuxoshwa osolwazi angafuni uzwane line party, incwadi ukushiswa-May 1933, noma ukufakwa izihloko nifane zamaNazi, ezifana 'ucwaningo uhlanga'.
ukuzimela Inyuvesi ezifundweni isuswe phakathi nokubusa kwamaNazi futhi isimiso sokudumisa yayisetshenziswa nasekuchazeni umthethosisekelo inyuvesi, njengoba li wayengasakwazi abakhethwe umzimba professorial kodwa waqokwa yi-Reichsminister wezasekhaya zezemfundo. Njengoba kwenzeka emanyuvesi yonkana eJalimane ngalesi sikhathi, izinombolo umfundi e Erlangen lehla kakhulu ngenxa yenqubomgomo zemfundo amaNazi.
1945 - I-University asitholayo nokwakha kabusha
Ngu ekupheleni kwempi yezwe yesibili, Erlangen kwaba edolobheni inyuvesi kuphela eJalimane, ngaphandle Heidelberg, okuyinto ziphunyukile cishe ngokuphelele ekubhujisweni. Abafundi zathuthelekela University lapho imfundiso waqala semester ebusika 1945/46, futhi kwakukhona kahlanu abafundi amaningi njengoba ngaphambi kwempi. Nakuba semester ehlobo 1927 sekube 1340 abafundi kanye ngemva kweminyaka eyishumi sekube 967, ngu semester ehlobo 1947, University kwadingeka 5316 abafundi.
Nokho, njengoba amanye amayunivesithi German kancane kancane isivuliwe iminyango yabo, izinombolo e Erlangen waqala uphonsa futhi ngasekupheleni 1950, kangangokuthi semester ebusika 1956/57, Erlangen kwaba nyuvesi kulencane eNtshonalanga Jalimane.
Inyuvesi kudingeka manje ukuhlinzeka izakhiwo ezintsha ngokwanele ngendlu yonke iminyango yayo kanye nezikhungo. Ezama ukulondoloza uhlamvu yeNyuvesi kanye izakhiwo zayo ngazinye ahlukeneko ndawonye enkabeni yedolobha, izakhiwo ezintsha awazange esakhiwe esizeni campus behlukene enkabeni yedolobha, njengoba kwakunjalo nakwezinye izindawo, kodwa esikhundleni eyakhelwe ezihlukahlukene sites osekwenze wayeke wakhonza ezinye izinjongo.
Lokhu kwakunjalo nangemaKhristu emabhalekisini ubudala e Bismarckstraße, lapho isakhiwo esisha ngoba umthetho, imfundiso ekhuthaza, humanities ne-social sciences lesikhumbuzo e 1953. Ngaphezu kwalokho izakhiwo ezintsha balandela enkabeni yedolobha, ikakhulukazi ngenxa Faculty of Medicine, ezifana uMnyango Neurosurgery e 1978, elakhiwa phezu Schwabachanlage lapho ngaphambili umtholampilo zengqondo bebemi.
Ukwanda enhle kakhulu ezenzeka enyuvesi 1960 yayisensimini engineering. I post-yimpi kudingeka isimanjemanje enikeziwe umfutho ukuze ungeze uMnyango ubunjiniyela, isifiso okwakukade waveza kudala njengoba 1903. Abasebenzi e-Faculty of Sciences manje waveza isidingo ubuhlakani yokuzijamela Ihluzo Elingafaki Ukuqoka futhi mechanical, enganikwa ukusekelwa umphakathi nezigele e 1957.
1961 - I-Faculty of Business, Economics and Social Sciences usekelwe
Ngokushesha ngemva kwalezi anezele, University enwetshiwe ohlangothini oluhlukile by ufake ekolishi municipally-uxhaso zebhizinisi, ezomnotho nezenhlalo wesayensi eNuremberg, eyasungulwa ngo 1919, ku-University ukwakha eyayingavamile ngaleso sikhathi ubuhlakani yayo yesithupha. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke University bamukela igama ngaphansi kulo namuhla eyaziwa, University of Erlangen-eNuremberg.
Kufundziswa ezomnotho kanye ukuphatha ibhizinisi, eyayintula kuze leli phuzu idlalwe kuphela indima encane ngaleso sikhathi Faculty of Humanities futhi Isayensi Yabantu e Erlangen, Kungenzeka manje kwenziwe ngezinga elikhulu kakhulu esizeni sayo eNuremberg. Lokhu ingxube asheshisa ukukhula izinombolo umfundi okuyinto lafinyelela inani elisha ekupheleni 1960.
1966 - I-Faculty of Engineering usekelwe
Ngo 1962, emva mpikiswano eside, ephalamende Bavarian ekugcineni wanquma ukusungula Faculty of Engineering e Erlangen. Kulokhu, University esezuze ukuyamelana emzini eNuremberg eyayihunyushwe icela ukuthi inyuvesi lobuchwepheshe wawuyomiswa eNuremberg amashumi eminyaka.
Njengoba izindawo Lubanzi ekwakheni umhlaba edingekayo kule phrojekthi zazingekho maphakathi Erlangen, iinsekelo campus entsha inyuvesi babekwa empumalanga eningizimu yomuzi e 1964. Ukusungulwa esisemthethweni the Faculty of Engineering, elaba ubuhlakani lwesikhombisa at FAU ngesikhathi, wathatha indawo 1966. Ngalesi sikhathi, University kwaba kuphela sikhungo eJalimane nge ubuhlakani engineering okwakubekelwa bafakwe izakhiwo akhona a classic iriseshi yaseyunivesithi hhayi njenge-inyuvesi ezizimele.
1968 - Umbutho umfundi athuthukisa
Ngezinye FAU, njengakwezinye izindawo, Eminyakeni elandelayo ubuswa ukunyakaza umfundi, ukunyakaza okwakufanele babe nalawo mathonya nehlala njalo ku ekuphileni zezemfundo. Le mibhikisho kubikwa ukuthi umfundi, eyayiphazamisa amanyuvesi kulo lonke Germany, ekuqaleni impendulo nezindaba okwakukhona luyingxenye ahlobene lasenyuvesi, ezifana izimo cwaningo abampofu. Ngo 1969, ukunyakaza umfundi wakhula olukhulu kakhulu futhi waba lithulusi yokuphikisana isimiso sezombusazwe ngokuvamile. Ngokubambisana namakhamphani namanye amaqembu kwezenhlalo, lokhu lakhula laba eyaziwa ngokuthi i-extra-ePhalamende ukunyakaza ukuphikiswa.
Kube ngxabano enkulu, ikakhulukazi kule mpikiswano phezu Bavarian komthetho weMfundo ephakeme ka ka 1974, izigaba zazo uvinjelwe abameleli umfundi ekusebenziseni igunya evamile engokwezombangazwe, futhi phezu German komthetho weMfundo ephakeme ka ka 1976. Le minyaka futhi kwabangela izinguquko eziningi ukuze isithombe yomphakathi yeNyuvesi, njengoba izinto eziningi eside zaziwa abangu ezaqedwa. Kube khona ukuphela ukuze osolwazi egqoke imijiva futhi, e 1968, ekugubheni uSuku Umsunguli sika, le 'efa academicus', okuyinto kuze kube yileso sikhathi okwakungakaze kuqhutshelwe ku Baroque ubukhazikhazi we Redoutensaal, wayiswa Ambience kunalokho kancane Flamboyant we Auditorium Maximus lapho eyenzekile kusukela ngaleso sikhathi.
1972 - I-Faculty of Education usekelwe
I-Faculty of Education yasungulwa ngo 1972, ekubeni ubuhlakani University lwesishiyagalombili ngesikhathi. It eyavela we-Institute for Mfundisi Training eyasungulwa 1956 futhi kamuva athuthukisiwe ku 1958 babe College of Education eNuremberg, ekolishi ukuqeqeshwa uthisha, ngaphambi kokuba abe ubuhlakani at FAU. By 2007, University kwadingeka 11 amandla, njengoba Faculty of Humanities futhi Isayensi Yabantu lahlukaniswa laba amandla ezimele emibili Faculty of Sciences ukuthi ezichithekile ku nabanye abathathu.
FAU befeze lukhulu entsha e semester ebusika 1991/92 nini, okokuqala, ke kwadingeka phezu 30,000 abafundi. Kuze phakathi yekhulu nesishiyagalolunye, azungeze 40 amaphesenti abafundi bangena kula amakhono of Theology and Law, kodwa kusukela ngo-isigamu kwekhulu lamashumi amabili wesibili isibalo esikhulu sabantu umfundi abadonsekela maqondana eyala entsha ye-engineering kanye yokuphathwa ibhizinisi, ezomnotho kanye nesakhiwonchanti setenhlalo sciences.
2000 - kwekuhlela kabusha okusha zenzeke
Ekuqaleni le kwekhulu lamashumi amabili nanye, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ubhekene nezinselelo ezintsha. Isandiso sezakhiwo phezu Südgelände (eningizimu campus) kanye nokwakhiwa kwezakhiwo ezintsha enkabeni yedolobha Okwamanje ekushintsheni nokubukeka okungokomzimba University. Ngo 2000, i-Nikolaus Fiebiger Centre of Yamamolekhula Zokwelapha Glückstraße esikhundleni yangaphambili isakhiwo physics kanye 2001 wabona kuvulwa omusha Röthelheim Campus esizeni wezikhali emabhalekisini ubudala. Isigaba sokuqala ukwakhiwa isikhungo esisha non-kuhlinzwa wacala 2002.
Inyuvesi yashesha ukusebenzisa shintsho entsha degrees esiphezulu kanye Master njengobe kuphakanyiswe Bavarian Ministry State of Sciences, Ucwaningo kanye Ubuciko, futhi lezi zinhlelo degree esikhundleni izinhlelo zangaphambili Diplom futhi Magister ekupheleni kweminyaka eyishumi.
Ngaphezu kwalokho, ukuze alondoloze isikhundla yokuncintisana ngezinga lomhlaba futhi ukuhlangabezana nezinselele Ngokuzayo, Umkhandlu Wezigele lokuvotelwa 7 February 2007 afeze kabusha olunzulu isakhiwo yeNyuvesi. Ngakho, e semester ebusika 2007/08, ikhono nanye abangu kabusha ku ikhono emihlanu-okwakukhethwa kuyo University Namuhla. Lezi amakhono sub-ihlukaniswe imiNyango izakhiwo yangaphakathi okuyinto zenzelwe ukuqinisa collaborations ekhona futhi udale amathuba emisha.
Uyafuna xoxa University of Erlangen eNuremberg ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
University of Erlangen eNuremberg kumephu
Izithombe: University of Erlangen eNuremberg Facebook ezisemthethweni
University of Erlangen eNuremberg Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa University of Erlangen eNuremberg.